Mogadishu Journal » Dagaal ka dhacay degmada Balcad
Mjournal :-Wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabelaha Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyo beeleed hubeysan uu dagaal ku dhex maray deegaan dhinaca Galbeed ka xiga qiyaastii 15km degmada Balcad.
Iskahorimaadkan ayaa geystey qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ay ku dhinteen lix ruux saddex kalana ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ahaa maleeshiyaadkii dagaalamayay.
Dagaalka u dhexeeya maleeshiyo beeleedyada ayaa ah mid salka ku haya lahaansho dhul deegaaneed iyadoo weli ay jirto xiisada dagaalka oo bilowday gelinkii dambe ee shalay soona gaaray barqanimadii maanta. Iskahorimaadkan ayaa qaboobay kadib markii mid ka mid ah labada maleeshiyo beeleed ay dib ugu gurteen deegaan dhinaca galbeed ka xiga halka uu iskahorimaadku ka bilowday.
Duqeyda dhaqanka iyo waxgaradka degmada Balcad oo uu ugu horeeyo Ugaas Maxamedweli Ugaas Xuseen ayaa bilaabay dadaalo ay ku qaboojinayaan xiisadan iyadoo halkaa loo direy guddi dhexdhexaadiya labada maleeshiyo beeleed.
Ugaas Maxamed Weli Ugaas Xuseen ayaa ugu baaqay beelaha ku dagaalamaya deegaanka Maalimey oo ka tirsan degmada Balcad inay dirirta joojiyaan ayna khilaafkooda ku dhamaystaan wadahadal.
Dagaalo ka dhashay lahaanshaha dhulka ayaa ku soo laablaabtay deegano hoos yimaada gobolka Sh/dhexe iyadoo dhowaan lagu guuleystey in la joojiyo dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kaasoo salka ku hayay lahaanshaha dhul deegaan ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Sh/dhexe.